Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Viljaskolan
25 Meey 2018, Xeerka Midowga Yurub ee Wadajirka Ilaalinta Macluumaadka (GDPR) wuxuu dhaqan galay, wuxuuna sidaas ku beddelay sharcigii hore ee Xogta Shakhsiyeed ee Sweden (PuL). Ujeeddadu waa in la ilaaliyo asturnaanta muwaadin kasta oo EU ah iyo in la xoojiyo xuquuqda qofka marka la shaqeynayo xogta shakhsiga ah.
Anagu hadaanu nahay Viljaskolan waxaan aaminsanahay in ilaalinta xogta iyo sharafta ay muhiim tahay. Waxaan raacnaa sharciyada hadda jira qaabkeena shaqada waxaanan ku dadaalnaa inaan dabaqno heerarka warshadaha ee ku saabsan amniga IT-ga.
Markaad la xiriirto Viljaskolan ama mid ka mid ah shaqaalaheena taleefan ama emayl, waxaan si otomaatig ah u soo aruurineynaa macluumaadka shakhsi ahaaneed oo ah qayb dabiici ah oo ka mid ah hirgelinta isgaarsiinta elektiroonigga ah. Tusaalooyinka macluumaadka shaqsiyeed waxay noqon karaan magac, lambar taleefan iyo cinwaanka emaylka.
Markaad booqato boggayaga internetka, falanqaynta iyo jarista adeegyada soo aruuri macluumaadka caadiga ah ee biraawsarkaagu na siiyo, sida cinwaanada IP-ka, xulashada biraawsarka, iwm.
Haddii aad ilmahaaga geliso safka Viljaskolan, waxaan u baahanahay inaan la socodsiino macluumaadka shakhsiyeed ee ilmahaaga. Waxaan ubaahanahay, iyo waxyaabo kale, magaca ilmahaaga iyo lambarka sooshiyal sekuuriti. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan uruurino qaar ka mid ah macluumaadka shaqsiyeed ee adiga kugu saabsan sida ilaaliye ahaan, tusaale ahaan macluumaadkaaga xiriirka.
Waxaan ku shaqeyneynaa xogtaada shakhsi ahaaneed iyadoo lagu saleynayo shuruudaha la dejiyey, taas oo macnaheedu yahay, iyo waxyaabo kale, in xogtaada la hayo waqtiga loo baahan yahay iyadoo lagu saleynayo; ujeedada howsha, waajibaadka naga saran sharciga kale ama sida uu ogol yahay sharciga quseeya.
Viljaskolan kama iibin doono xogta shaqsiyadeed qof kale.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, faallooyin ah ama aad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto oo ku saabsan waxyaabaha laga soo qaatay diiwaanka, si aad uga laabato oggolaanshaha ama aad u sameyso sixitaan, la xiriir info@viljaskolan.se